Christmas အတွက် Too Faced ကနေ အသစ်ထွက်လာတဲ့ Holiday Collection လေးတွေ | CosmeticMyanmar
Home » Article » Christmas အတွက် Too Faced ကနေ အသစ်ထွက်လာတဲ့ Holiday Collection လေးတွေ
??❄️⛄️မကြာခင်မှာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သီချင်းသံလေးတွေနဲ့ခရစ်စမတ်ကိုဖြတ်သန်းရတော့မယ်နော်။ အကြိုရင်ခုန်နေတာနဲ့တင်ပျော်နေပြီလေ။ ခရစ်စမတ်ဆိုတာက ကိုယ်တွေနဲ့သိပ်မသက်ဆိုင်ပေမယ့်လည်း အလှဆင်ထားတဲ့မီးလုံးတွေ ပစ္စည်းလေးတွေတွေ့ရင်စိတ်ထဲမှာအလိုလိုကိုပျော်ရွှင်လာတာကိုတော့ငြင်းလို့မရပါဘူးနော်။ ခရစ်စမတ်ရဲ့ Theme color ဖြစ်တဲ့အနီရောင်နဲ့အဖြူရောင်လေးတွေကလည်း လူတွေကိုဆွဲဆောင်နေတာပေါ့။ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာတော့ခရစ်စမတ်ကိုတစ်ခမ်းတစ်နားကျင်းပကြပြီးတော့ ဓမ္မတေးတွေကိုလည်းသံပြိုင်သီဆိုကြတာတွေက ပျော်စရာကောင်းလွန်းလှပါတယ်နော်။ အခုမင်မင်ပြောပြမှာလေးကတော့ ခရစ်စမတ်အမှီလှလို့ရအောင်ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ Too Faced ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းလွန်းလှတဲ့ collection လေးတစ်ခုကိုလက်တို့ပေးမလို့ပါ။
ခရစ်စမတ်မှာထွက်မှာဆိုတော့ မင်မင်က အနီနဲ့အဖြူကိုတော့သုံးမှာပဲလို့ထင်မှလိုက်တာပေါ့နော်။ သူလေးက ကောင်မလေးတွေအသည်းကိုကိုင်လှုပ်လိုက်တာပါ။ Peach အရောင်နုနုလေးကို အသုံးပြုထားပြီးတော့ အထဲကပစ္စည်းလေးတွေကလည်းထိရက်စရာမရှိအောင်လှလွန်းပါတယ်။ Too faced ကတော့ အရင်တည်းက ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပုံလေးတွေ, packaging လေးတွေကြောင့်နာမည်ကြီးပါတယ်။ သူ့ရဲ့ eyeshadow palette လေးတွေဆိုရင် ကိုက်စားချင်စရာကောင်းလောက်အောင်ချစ်ဖို့ကောင်းလှပါတယ်နော်။ အခုလည်း ဘာတွေပါလဲ စျေးတွေကလည်းဘယ်လောက်လဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။
?Peach Tinsel ($39)
Christmas မှာ သစ်ပင်လေးတွေမီးလေးတွေက လက်လက်နဲ့လှနေသလိုမျိုးပဲ အချစ်တို့လည်း bling လို့ရတယ်နော်။ သူလေးက glitter အမှုန်လေးတွေပါဝင်တဲ့ highlighter လေးဆိုတော့ ဘာလိုသေးလဲ? Glow ပြီလေ။ ဒီ Loose sparkling party powder နဲ့ frosted matte peach lipstick လေးကတကယ့်ကိုလိုက်ဖက်တဲ့ အတွဲစပ်လေးပါနော်။ Lipstck လေးကလည်း nude ကြိုက်တဲ့အချစ်လေးတွေအတွက် peach အရောင်နုလေးဆိုတော့ တကယ့်ကို Christmas နဲ့လိုက်ဖက်တာပေါ့။ Highlighter လေးကို လိမ်းလို့ရမယ့် puff လေးပါပါတော့ brush သပ်သပ်တောင်ထပ်မလိုတော့ပါဘူးနော်။
?Dream Queen Collection ($58)
Packaging ကတော့အလန်းကြီး, အကြွေဆင်ကြီးနော်။ Eyeshadow palette တစ်ခုပါတယ်။ သူ့ palette က ထောင်ထားလို့ရတော့ eyeshadow ခြယ်နေရင် ကိုင်ထားစရာတောင်မလိုပါဘူးနော်။ အရောင်ကတော့ ၂၄ ရောင်ပါပြီးတော့အဲ့ palette ထဲမှာတင် Blusher, Contour powder, Highlighter ပါနေတော့ တစ်ခုဝယ်တာနဲ့တင်အကုန်သုံးလို့ရတာပေါ့။ မိုက်တယ်နော်။ ဒါပေမယ့် sephora မှာတော့ too faced ရဲ့နာမည်အကြီးဆုံး best seller လို့တောင်ပြောလို့ရတဲ့ Better Than Sex Mascara လေးရယ်, Pink Swan Lip gloss လေးရယ်, Travel size Hangover 3in1 spray ရယ်, Pink Swan Make up bag လေးပါထည့်ပေးတာသေးတယ်နော်။
?Beauty Daydreamer Collection ($42)
သူလေးကလည်း eyeshadow palette လေးပါပဲ။ အရောင် ၁၆ရောင်ပါဝင်ပြီးတော့ ခုနကအတိုင်းပဲ contour, blusher, highlighter ပါဝင်ပါတယ်နော်။ အရောင်လေးတွေကတော့ နေ့ဘက်တွေလိမ်းလို့ရတဲ့အရောင်လင်းလင်းလေးတွေဘက်ကိုသွားထားပါတယ်။ Shimmer ပါတာလေးတွေလည်းပါတော့ Day out တွေဘာတွေဆိုရင်အဆင်ပြေပြီလေ။
?Under The Christmas Tree Palette Collection ($49)
သူလေးကတော့ မင်မင်အကြိုက်ဆုံးပဲ။ အရောင်လေးကိုကြည့်ဉီးလေ။ ပန်းရောင်ကိုမှ ခရစ်စမတ်သစ်ပင်ပုံစံလေးလုပ်ထားတော့ ကြွေပြီလေ။ ဒီထဲမှာလည်း blusher, bronzer,highlighter လဲပါတော့အရင်က palette တွေလိုပဲ တစ်ခုတည်းနဲ့အဆင်ပြေတယ်။ Eyeshadow အရောင်လေးတွေကလည်း တကယ့်ကို neutral အရောင်လေးတွေဆိုတော့ ဘယ်လို အချိန်ဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေတယ်။
?Sugar Cookie Eyeshadow Palette($26)
OMG! ဒီ palette ကတော့ ရူးခါနေတာပဲ။ Packaging လေးကိုကြည့်ပါဉီး။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အသွင်လေးနဲ့ eyeshadow အရောင်လေးတွေကလည်း နေ့တိုင်းသုံးလို့ရလောက်တဲ့ အရောင်လေးတွေဆိုတော့ အဆင်ပြေတယ်လေ။ ပြီးတော့ အရောင်ကွက်တွေကလည်း အများကြီးမဟုတ်တော့ ခရီးသွားရင်လည်းအလွယ်တကူသယ်သွားလို့ရတယ်နော်။ Shimmer လေးတွေနဲ့မို့တောက်ပတဲ့ မျက်ဝန်းတစ်စုံကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာအသေအချာပါပဲ။
❄️The Sweet Smell of Christmas Liquified Lipstick Set ($25)
ဒါလေးကတော့ နှုတ်ခမ်းနီ set လေးပါ။ Limited Melted Matte Lipstick လေးတွေကတော့ သင့်နှုတ်ခမ်းလေးတွေကိုအတောက်ပဆုံးထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှာပါနော်။ cinnamon, hot buttered rum, sugar cookie, and pumpkin spice ဆိုပြီး နာမည်လေးတွေပေးထားပါတယ်နော်။ Christmas Collection လေးကတော့ packaging တွေနဲ့တင်တန်နေပါပြီနော်။
☃️Better Than Sex Mascara Vault ($69)
ဒါကတော့ Too faced ချစ်သူတွေဆိုရင်တော့သိမှာပါ။ မျက်တောင်တွေကိုအတုတပ်ထားသလိုဖြစ်နေစေမယ့် မျက်တောင်ကော့ဆေးလေးပါ။ အခုတော့သူက set လိုက်ကိုထုတ်လိုက်တာပါ။ ပြီးတော့ အကုန်လုံးက full size တွေချည်းပဲဆိုတော့ တစ်နှစ်လုံးတောင်သုံးကုန်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ ပျော်စရာကြီးနော်။
ပြောရရင် ဒီလို collection တွေကဝယ်သင့်တဲ့ထဲမှာပါတယ်နော်။ Palette လေးတစ်ခုနဲ့တင်အကုန်လုံးပါပြီးတော့ သူ့ရဲ့ရောင်းအားအကောင်းဆုံးပစ္စည်းတွေကိုရော, နောက်အသစ်တွေကိုရော တစ်စုတစ်စည်းတည်းမြင်ရတဲ့ collection တွေဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးနော်။ ဒါလေးတွေကိုတော့ online shop တွေမှာ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်နော်။ စျေးတွေကလည်းဖော်ပြပြီးသားမို့ ကိုယ်တိုင်တွက်ပြီး မှန်းကြည့်ပြီးမှဝယ်ဖို့တော့အကြံပေးချင်ပါတယ်နော်။ ဒေါ်လှလေးကလည်း သိပ်မကျသေးတော့လေ?
Tags: christmas collectiontoo faced